सामसङको यो टिभीको मूल्य सुन्दा उड्नेछ होस, यति धेरै मूल्य पर्ने यसमा के खास छ ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सामसङको यो टिभीको मूल्य सुन्दा उड्नेछ होस, यति धेरै मूल्य पर्ने यसमा के खास छ ?
एजेन्सी। दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसङले भारतमा निकै महंगो टिभी लञ्च गरेको छ । भारतमा उपलब्ध भएसँगै यो टिभी अब नेपाल आउन सहज भएको छ । यो सामसङको अहिलेसम्मकै महंगो टिभी भएको बताइएको छ ।
प्रिमियम क्याटगोरीको यो टिभीको मूल्य १ करोड भारतीय रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । यसको टप मोडलको मूल्य ३ करोड ५० लाख भारु छ जसको नेपाली रुपैयाँ ५ करोड ५६ लाख हुन्छ । यसमाथि विद्युतीय सामान भारतबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार पनि जोड्ने हो भने यसको मूल्य नेपाल आउँदा ८ करोड ६८ लाख पुग्छ । ३२ इन्चभन्दा ठूलो टिभी नेपाल ल्याउँदा मूल्यको ५५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ ।
यो टिभी ११० इन्च फूल एचडी, १३० इन्च फूल एचडी, २२० इन्च अल्ट्रा एचडी र २६० इन्च अल्ट्रा एचडी मोडलमा उपलब्ध छ । कम्पनीका अनुसार यो टिभीबाट दर्शकले मल्टिप्लेक्स सिनेमाघरमा जस्तो अनुभूति घरमै गर्न पाउनेछन् । यसलाई एक्टिभ एलइडी पनि भनिन्छ । यसको मूल्यमा ठूलै घर वा निकै विलासी कार किन्न सकिन्छ । यसरी घर वा कार किन्दा समेत यसबाट केही पैसा बच्न सक्छ । यति महंगो टिभी किनेर घरमा जडान गर्ने उपभोक्ता कस्ता होलान् भन्ने विषयमा चर्चा बढेको छ ।
सामसङको भारत शाखाका भाइस प्रेसिडेन्ट पुनित सेठीले भने यो उपभोक्ताको मागलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको दावी गरेका छन् । यी सबै टिभीमा एचडीआर पिक्चर रिफाइनमेन्ट टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएकोले यसको दृश्य अत्याधिक रियल र क्लियर हुने कम्पनीले दावी गरेको छ ।